Sei The E-skateboard Saka Sizzling Uye Akagamuchirwa By You. - Jomo Technology Co., Ltd
Sei The E-skateboard Saka Sizzling Uye Akagamuchirwa By You.
Ndicho chokwadi zvachose, kana vachiti vari dzakasiyana, pane imwe mhando saka aizivikanwa IOS pamusika kare. Izvi ruoko isina dzemagetsi Scooterskana yemagetsi skateboard inogona kuendeswa miriyoni nzvimbo, hazvina basa kuti iwe akavadana. Koowheel Newest shanduro Electric skateboard Kooboard: Ndiyo nzira zvikuru vechidiki kuti unakirwe uye komiyuta panguva imwe chete. Tinotora kunakidze ane skateboard, kuita sezvo nyore kushandisa sezvo gwenya sikuta, pashure iyo ugozvipa nemamwe zvishoma swag. Electric Skateboard makazara mafaro uye chinova chitandadzo muduku pemarudzi mazhinji. Wemagetsi skateboard yakanga yakagadzirwa uye rakabva Koowheel muchiso mu China.
Somugumisiro, havana anoti, kuti skateboard haana chete navi mudziyo asiwo kuvandudza upenyu unhu munhu neimwe nzira. Zvinogona wakawedzera mukana wokushandiswa uye unotedza rwendo. Kana iwe uri wakarindira muchihwande kwadzinoita chokufambisa kuti anogona kutora kubva panzvimbo imwe neimwe, nokukurumidza, unofanira vasarudze mutengi nokuriita. Chinokosha zivo zvifambiso akanyatsorongwa ndechokuti mumarori kuwana yokutanga pamusoro pachavo motokari kuti chishoma mumugwagwa chinhu kupaka. The kwakapararira Vanhu zvave, nokuti chikuru nguva, raparurwa kuti nyika anozvipira vakadengezera chokufambisa.
Koowheel Skateboards dzinovakwa munyoro uye simba apo kupa iwe pamwe smoothest rwendo uko. Mumazana tsvakurudzo yedu takaziva kuti marudzi akawanda Asian akanga atova massively mukuru Electro-mufambo uye zvimwe, kusvikira mumwe zvebhizimisi rwendo, takanga nemamiriro magetsi Scooters, kuyengerera mapuranga uye - Skateboards! Mabhatiri izvi akanga utilizing sizvo voltage kana masero chakaremara uye wandei kuyengerera mapuranga abatwa moto asi kuchaja kana vaifamba. Asi haasi strangest chinhu pamusoro pavo-anogona kuva chokwadi kuti Hottest gore rino yezororo mubayiro anoramba uchibata nemoto. Chokutanga chinhu Waona pose uchitarisa itsva nhumbi sikuta vanenge asipo, kana mukaha, mukufamba muchina. The Koowheel ari Chinese akaita nokuzviremekedza vakadengezera sikuta izvi vagadzirira kuwana mhando hoverboard vazhinji nokuda kwayo mufashoni zvakagadzirwa.
Post nguva: Oct-19-2017